Hot News || Model Photo || Penpal magazine
रिपोर्टिङ गर्दा गर्दै दोलखाको सिंगाटीमा केन्द्रबिन्दु भएर गएको भुकम्पको लाईभ हेर्न नभुल्नुहोस् । बेलायतको स्काई न्यूजले नेपालको भूकम्पका विषयमा तयार पारेको यो स्पेशल रिपोर्ट Friday, September 30, 2016
दसैँको पूर्वसन्ध्यामा पशुबलि निषेध सचेतना र्याली
फोटो फिचर हेर्नका लागि यस लिंकमा जानुहोस्
नेपालमा धर्म, संस्कृति र परम्पराको आडमा देवी देवतालाई खुसी पार्न भन्दै पशुबलि दिने गरिन्छ । पशुलाई निर्मम तरिकाले हत्या गर्ने यो प्रथामको अन्त्यका लागि आवाज नउठेको हैन । तर, रोक्न सकिएको छैन ।
नेपालमा सबैभन्दा बढी बलि गढीमाईको मेलामा दिइन्छ । त्यसपछि दशैंमा राक्षसी प्रवृत्तिको अन्त्य भन्दै पशुबलि दिइन्छ । दशैंमा राक्षसी प्रवृत्तिको अन्त्य भनेको मान्छेमा भएको कुविचार, कुसंस्कारको बलि दिनुपर्छ भन्ने हो तर, यहाँ उल्टो भैरहेको छ ।
“अरूको प्राण लिएर पुण्य कमाउने काम मन पर्दैन । जीव हत्या गरेर आफ्नो मनोकामना पूरा गर्नु धर्म होइन ।” पशुबलिलाई पाप सम्झने पाँचखाल काभ्रेकी मीरा चौलागाईंको भनाइ हो यो ।
प्राणीको हत्या गरेर धर्म हुन्छ भन्ने गलत धारणा समाजमा व्याप्त रहेकामा उहाँलाई निकै दुःख लाग्छ । मन्दिर मन्दिरमा जीव हत्या गर्ने प्रचलन हटेको कहिले सुन्न पाइएला भन्ने प्रतीक्षामा उहाँ हुनुहुन्छ । उहाँले अहिलेसम्म जीव हत्या गरेको हेर्नु भएको छैन । हेर्न पनि सक्नु हुन्न ।
पशुबलि धर्मका चल्दैआएको कुप्रथा रहेको बताउनुहुन्छ सोह्रखुट्टे, काठमाडौँकी रिता तिमल्सिना । “राम्रो भविष्य, दीर्घायुको कामना, राम्रो शिक्षादीक्षा, सफल जीवनका कामना गर्न मन्दिरमा रगतको बलि चढाउनु त पाप हो नि ।” – उहाँले भन्नुभयो । आफूले अहिलेसम्म कुनै जीवको बलि मन्दिरमा नचढाएको पनि उहाँले सुनाउनुभयो ।
नेपालमा बडादशैंको नौरथा सुरु भएपछि विभिन्न शक्तिपीठमा दुर्गा मातालाई खुसी पार्न व्यापक रुपमा पशुबलि दिइन्छ तर योे प्रचलनको अहिंसावादीहरुले चर्को विरोध गर्दैआएका छन् । उनीहरुको भनाइमा ‘पशुबलि धर्मका नाममा अपराध हो’ र ‘अहिंसा नै परम धर्म’ हो ।
संस्कृतिविद् डा गोविन्द टन्डनका अनुसार दक्षिणकाली, भद्रकालीलगायत शक्तिपीठ, मन्दिरमा नवरथामा हजारौँ प्राणीको बलि दिने गरिएकामा अहिले नगण्य रुपमा मात्रै छ र धेरैले नरिवलको बलि दिने गरेका छन् । “पशुलाई भगवतीका शक्तिपीठमा लगेर हत्या गरेर धर्म हुन्छ भन्ने कुरा गलत हो,” बलिप्रथा रोक्ने अभियानका अभियन्ता डा टन्डनले भन्नुभयो, “अरूलाई दुःखकष्ट नदिनु नै धर्म हो, बलि दिएर देवी–देवता कहिल्यै खुसी हुँदैनन् ।”
थप वाँकी......... Read more »
9/30/2016 07:40:00 AM
डाक्टरले 'घरमा बसेर मृत्यु कुर' भनेपछि सन्ध्याले गगनलाई यस्तो पत्र लेखिन्
माननीय स्वास्थ्यमन्त्रीगगन थापाज्यूनमस्कार।
हुन त म एक दिन मर्ने नै थिएँ। तर, केही समय चाँडै मर्ने भए। यसैले म दुःखी त छु भन्नै पर्यो। हो, म दुःखी छु अनि म मर्नु पहिले तपार्इँलाई भेटेर केही कुरा गर्न चाहन्छु। खासमा हाम्रो देशमा लापरबाही किन हुन्छ? बुझेर मर्न चाहन्छु।माननीय मन्त्रीज्यू। हुन त म बाँचेर पनि देशको लागि के गर्न सक्थे होला र। तर, म मर्ने पक्का भए पछि किन हो देशको हो या आफ्नो खुब माया लागिरहेको छ। किन हो खै। मैले देखेका बेथितिहरू प्रति मेरो मनमा धेरै घृणा छ। लाग्छ म अब त केही दिनपछि मर्छु पनि होला। तर, मैले मेरो उपचार गर्दा पाएको दुःख हजुरलाई सबै भन्न चाहन्छु। न कि म जस्ता यो देशका नागरिकले म जस्तो दुःख नपाउन। पीडा नपाउन। बेथितिको सिकारले मृत्यु नपाउन।
तपार्इँलाई मेरा धेरै कुराहरू भन्नुछ। जुन कुराहरू म चाहेर पनि यस पत्रमा लेख्न सक्दिँन। भन्न सक्दिँन। घाउ पनि दुखेर बढिरहेको छ। पीडाले मुटु कापिरहेको छ। म योभन्दा बढि लेख्न सकिनँ। कृपया सक्नु हुन्छ भने म मर्नु पहिले म हजुरसँग सबै कुरा भन्ने समय पाउँ। सक्नु हुन्न भने यो काम चाहिं गरिदिनुहोला। देशका हर नागरिकलाई मृत्यु दिने बेथितिहरूको अन्तहोस्। लापरबाहीले एक वर्षपछि मर्ने नागरिक एक वर्ष अघि न मरोस्। नमस्कार।सन्ध्या शाही, जुम्लाहाल–काठमाडाैं
9/24/2016 05:44:00 AM
कागले लगेको भाषाको कान
(नेपाली भाषामा भैरहेको विवादित विषयमा युग पाठकको आलेख)
केही हप्तायता ‘नेपाली भाषा बचाऔँ अभियान–०७२’का नाममा छापिएको एउटा फ्लेक्स बोर्डले हल्लीखल्ली मच्चाएको छ । फ्लेक्समा ‘राष्ट्रिय विभूति गौतम बुद्ध कि रास्ट्रिय बिभुति गउतम् बुद्ध ?’ जस्ता तीन तुलनात्मक उदाहरण दिइएका छन् । र, गुहार लगाइएको छ– लौ न, भाषा भत्काएर गल्र्यामगुर्लुम ढाल्न लागे ।
त्यसो त शरदचन्द्र वस्तीको नेतृत्वमा ‘भाषा बचाऊ’ अभियान चल्न लागेको ०६८ सालदेखि नै हो । वेलावेला वस्ती आफौ र उनका समर्थकले प्राडाहरूले भाषा बिगारेको आरोप लगाएर लेख्ने/बोल्ने गरिआएकै हुन् । तर, अचानक यो विवादले आमसञ्चार तताएको चाहिँ माथि उल्लेखित फ्लेक्स बोर्ड सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती भएपछि हो । के परिमार्जित भनिएको हिज्जेको नियमले उक्त फ्लेक्स बोर्डमा भएकै जस्तो सबै अक्षरलाई छुट्याएर लेख्ने प्रस्ताव गरेको हो त ? वास्तवमा यो कथित् भाषा विवाद के हो ? यो रचनात्मक बहस हो कि नाक ताकेर औंलो उज्याउने विवाद ? यतातिर पनि बहस गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।
बहस कि जिद्दी ? अहिले चलेको विवाद भाषालाई लोकतान्त्रिक र रचनात्मक बनाउने बहस होइन, भाषा विवाद पनि होइन, फगत हिज्जेको विवाद हो । यस्ता विवाद इतिहासमा पटक–पटक चल्दै आइरहेका छन् । पचास वर्षदेखि खासखास शब्दलाई ह्रस्व लेख्ने कि दीर्घ लेख्ने भनेर विवाद गरिएको छ र यो विवाद टुंगोमा पुग्ने कुनै छाँट छैन । पटक–पटक भाषाविद्हरू गोष्ठीमा जुट्छन् र विवादलाई बल्झाएर फर्कन्छन् । विवादको पछिल्लो एपिसोड नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले ०६७ मा आयोजना गरेको ‘नेपाली भाषा संगोष्ठी’को हिज्जे परिमार्जन गर्ने निर्णयपछि सुरु भएको हो भनिएको छ । यो गोष्ठीमा सहभागीमध्येकै एक भाषाविद् शरदचन्द्र वस्तीको अगुवाइमा अर्को वर्ष त्यो निर्णयविरुद्ध ‘ललितपुर घोषणापत्र’ जारी भयो । अहिले आएर सुधारवादी खेमाका प्रा. हेमाङ्ग राज अधिकारीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी हालिएको छ भने परिमार्जनको निर्णय तत्काल रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । भाषाको सार्वजनिक बहसका नाममा केही शब्दका हिज्जे यस्तो शुद्ध कि उस्तो शुद्ध भनेर ढिपी गरिएको छ । यस्तो महसुस हुन्छ कि भाषामा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न चाहने गुटैपिच्छेको जिद्दी चलिरहेछ । १९९१ सालमा ‘नेपाली भाषा प्रकाशिनी समिति’ले छापेको ‘नेपाली कसरी शुद्ध लेख्ने’ भन्ने पुस्तिकामा जे नियम छापिएको छ, त्यही हुनुपर्छ, त्यसमा टसका मस पार्न हुँदैन भन्ने वस्ती समूहको जिद्दी छ । वस्ती समूहकै सदस्य केदार शर्माका अनुसार ‘नेकशुले ०६९’ त्यही पुरानो नियमको नयाँ संस्करण मात्र हो । यो भाष्यका अनुसार सुधारवादीले बनाएको नयाँ नियमले नेपाली भाषा भत्काएर ध्वस्त बनाइसक्यो । उता सुधारवादीहरूको दाबी छ– हिज्जेका केही नियम फेरेर सजिलो र बोलीचालीको उच्चारणसँग नजिक हुने गरी सुधार गरिएको हो । भाषा भनेको केवल शब्द होइन र भाषाको विकास हुनु वा नहुनु हिज्जेको एकाधिकारको विषय होइन । कुनै पनि शब्दले अर्थ निर्माण गर्दा बोलिएको संकथनको सन्दर्भ, वाक्यले बोक्ने समय सन्दर्भ तथा सामाजिक–सांस्कृतिक व्यवस्थालगायत अनेक सन्दर्भलाई एकैचोटि तानेर ल्याइराखेको हुन्छ । त्यसैले फूल र फुल लेख्दा अर्थमा फरक पर्छ भनेर जिद्दी गर्ने वेला के ख्याल राख्नुपर्छ भने जनजीवनमा कुखुराले ‘फुल’ पार्न छाडिसक्यो र ‘अन्डा’को व्यापार फस्टाइसक्यो । जनजीवनले अप्ठ्याराहरू आफौ फुकाउँदै जान्छ, भाषाविद्को शुद्ध नियम पढेर ह्रस्व फुल खोज्न कोही बजार जाँदैन । यद्यपि लेख्य भाषामा अधिकतम् एकरूपता हुनु भाषाको आवश्यकता हो । तर, अहिले चलेको विवाद भने भाषाको राजनीतिसँग बढी सम्बन्धित छ भन्ने तथ्य क्रमश: उजागर हुँदै छ । यसको सबैभन्दा टड्कारो उदाहरण हो व्यापक प्रचारमा ल्याइएको फ्लेक्स । फ्लेक्सले भन्छ– ‘प्रधानमन्त्री कि प्रधान् मन्त्रि ?’, ‘गौतम कि गउतम् ?’ । कथित् सुधारिएको हिज्जेको नियमले के शब्दहरूलाई यसैगरी फुटाउँछ त ? भएभरका जम्मै संयुक्त अक्षरलाई टुक्रा गरेर लेख्ने नियम बनाइएको हो त ? प्रा. हेमाङ्ग राज अधिकारीका अनुसार त्यसो कसैले कहिल्यै भनेको छैन । यिनै अधिकारी अहिले भाषा बिगारेको आरोप खेपिरहेका छन् । अधिकारीकै संयोजकत्वमा आयोजित गोष्ठीले नयाँ नियम पारित गरेको थियो । उनको कुरा सुन्ने हो भने द्द, द्य, क्त, द्व जस्ता केही संयुक्त अक्षरलाई छुट्याएर हलन्त गर्ने भनिएको हो, त्यो पनि विद्यार्थीको सिकाइलाई सजिलो पार्न । फ्लेक्समा भएको जस्तो प्रधानमन्त्रीको प्र र त्र, तथा ज्ञ, क्ष लगायतलाई टुक्र्याउने भनेको होइन । स्पष्ट कुराचाहिँ के भने फ्लेक्समा भएको जस्तो आधा अक्षर (न्) र मात्रा (गौतमको गौ लाई ौ हटाएर गउ) समेत छुट्याएर अलग्गै लेख्ने भनेर कसैले भनेको छैन । थप वाँकी......... Read more »
9/24/2016 03:09:00 AM
नेपालका चर्चित लेखकका पुस्तकको कभर ‘चोरी’ गरेर बनाईएको खुलासा (प्रमाणसहित)
बौद्धिक चोरीको सवाल पछिल्लो समय निकै उठ्छन् । खासगरि अर्काको बौद्धिक कामको चोरी गरेर जस आफुले लिने प्रचलनलाई बौद्धिक चोरीको संज्ञा दिईन्छ । कुनै काम गर्नका लागि एउटा मानिसले त्यससँग सम्बन्धित रहेर धेरै अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । र, यसरी अनुसन्धानबाट निस्किएको कुनै प्रतिफलको ‘जस’, जसले दुख गरेको हो उसले पाउनुपर्छ । तर कसैले मरिमेटेर दुख गर्ने तर ठिक त्यहि कुरालाई नक्कल गरेर जस आफुले लिने गरेका धेरै उदाहरणहरु पछिल्लो समय भेटिन्छन् ।
खासगरि बौद्धिक चोरीको सवालमा फिल्म उद्योग अगाडि छ । नेपाली फिल्मको पोस्टर मेकिङमा बौद्धिक चोरी प्रस्ट झल्किन्छ । र, नेपाली पोस्टर डिजाईनरहरु यो सवालबाट धेरै चोटी घेरिईसकेका छन् । हुन त यस्तो खाले बौद्धिक चोरी बलिउड र हलिउडमा पनि नहुने चाँहि होईन । बौद्धिक चोरीको सवाल धेरै कुरामा जोडिन्छ । बौद्धिक चोरीलाई अँग्रेजीमा ‘प्लागियारिज्म’ भनिन्छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा निकै चर्चा कमाएका केहि उपन्यास तथा पुस्तकहरुको कभर डिजाईन पनि चोरेर राखेको पाईएको छ । यसलाई जानकारहरुले ‘बौद्धिक चोरी’ भनेर चर्चा गरिसकेका छन् । बुद्धिसागरको कर्णाली ब्लुजदेखि पछिल्लो पटक कुमार नगरकोटीले लेखेको मिस्टिका सम्मका केहि नेपाली पुस्तकको कभर चोरेको पाईएको छ । हामीले यहाँ प्रमाणसहित पेश गरेका छौँ ।
मिस्टिका लेखक कुमार नगरकोटीले लेखेको पहिलो उपन्यास हो । फुटकर कथाहरु लेख्दै आएका नगरकोटीले केहि वर्ष अगाडि एउटा कथा सँग्रह बजारमा ल्याएका थिए । त्यसपछि उपन्यास लेखेका नगरकोटीको यो पुस्तक यतिबेला पाठकहरुमाझ चर्चामा छ । यो पुस्तकको कभर ‘माई क्याट नेम लुकाज’सँग ठ्याक्कै मिल्छ । बुक हिल पब्लिकेशनले यो उपन्यास बजारमा ल्याएको हो । यस पुस्तकको कभर डिजाइन गर्नुमा मुख्य भुमिका अर्का लेखक बुद्धिसागरको छ । शुरुमा अर्को डिजाइन फाइनल गरिए पनि पछि बुद्धिसागरले कालो ब्याकग्रउण्डमा बिरालोको तस्विर सतिह कभर फिक्स गरेका थिए ।
बुद्धिसागरले लेखेको यो उपन्यास निकै चर्चित उपन्यास हो । फाईनप्रिन्टले बजारमा ल्याएको यो पुस्तकको कभर पनि ठ्याक्कै अरुसँग मिल्छ । यो उपन्यासले बाबु र छोराको सम्बन्धको बारेमा बोल्छ । यो उपन्यासको कभर कहाँबाट ल्याएर टपक्क यहाँ राखिएको यहाँ फोटो हेर्नुस् ।
9/09/2016 09:00:00 AM
9/04/2016 10:17:00 AM
Hot & Sexy Nepali Model Girl Poojana Pradhan Nepali actress Deepa shree Niraula
Personal Details Name : Deepa Shree Niraula Birth Date : August 30, 1975 Nationality ...
सपना बाँड्दै, दुःख थप्दै सरकार
रत्न प्रजापति ग्यास छैन । मट्टीतेल छैन । त्यसैले सर्वसाधारणको चिसो चुलो तताउने काम निकै कठिन र महँगो बनेको छ । ग्यास पाइने आशामा ग्या...
Valentine's Special Amir Gautam & Babina Sharma
हाम्रोपात्रोमा तिहार विशेष ई-कार्ड
कलम र क्रान्ति